Faah-faahin Qarax ka dhacay Kismaayo | Keydmedia
Faah-faahin Qarax ka dhacay Kismaayo
Qaraxa ayaa lagu weeraray dhismo ku yaallo magaalada Kismaayo ee xarunta KMG u ah Jubbaland.
MUQDISHO, Soomaaliya - Magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland, waxaa xalay fiidkii ka dhacay qarax jugtiisa inta badan laga maqlay xaafadaha magaalada sida ay keydmedia Online u xaqiijiyeen dadka goob joogayaal ah oo aan khadka taleefonka kula xiriirnay.
Qaraxa ayaa ka dhex dhacay dhismaha Dabaq ku yaallo xaafadda Luga Baxsi, gaar ahaan nawaaxiga hotelka Fadlullaah ee magaalada Kismaayo, waxaana la sheegayaa in qaraxa uu bur bur xooggan u geystay dhismaha guriga oo ahaa mid dhawaan la dhisay.
Guriga la qarxiyay ayaa la sheegayaa in uu lahaa Ganacsade caan ka ah magaalada, kaasoo magaciisa lagu soo koobay Cabdullaahi Gaariyow, waxaana la sheegayaa in guriga aysan cidna ku sugneyn xilliga qaraxu dhacayay, taasoo sababtay in aanu wax khasaaro geysan qaraxa.
Wararka ayaa sheegaya in Ganacsadaha dhismihiisa la qarxiyay ay dhowr jeer oo hore soo waceen Al-shabaab, iyagoona weydiisanayo in uu bixiyo lacag canshuur ah, taasoo keentay in uu Ganacsadaha ka dhega adeego, islamarkaana gurigiisa la qarxiyo.
Ciidamada amaanka ayaa isku gedmaay dhismaha guriga, iyagoo baaritaanno ka bilaabay agga guriga, ilaa iyo hadda majirto waxa khasaaro ah oo dhimasho ama dhaawac ah oo la soo wariyay, marka laga reebo bur bur maaliyadeed.